April 9, 2017 सम्पादक अन्तरबार्ता, ग्यालरी
दिनेश पौडेल, उत्तरी मोरङका सामाजिक तथा स्पष्ट राजनीतिक वक्ताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । २०५६ मा विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति आरम्भ गर्नुभएका पौडेल हाल माओवादी केन्द्र मिक्लाजुङ गाउँपालिका अध्यक्ष रहनुभएको छ । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा २०५८ सालमा तत्कालिन राज्यपक्षबाट उहाँलाई चरम शारीरिक तथा मानसिक यातनासमेत दिइएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको चर्चासँगै माओवादी केन्द्रको प्रभाव क्षेत्र मानिएको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा पार्टीबाट अध्यक्षको दाबेदारसमेत हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, पौडेलसँग स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको तयारी, पार्टीको सांगठनिक अवस्था तथा गतिविधिलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ः
चुनावी अभियान कस्तो चलिरहेको छ ?
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका ९ वटै वडामा माओवादी केन्द्रले चुनावी अभियानलाई तीब्र बनाएको छ । हामीले ९ वटै वडामा ३७ वटा कमिटी गठन गरेका छौं । नयाँ संरचनाअनुसार क्षेत्रीय कमिटीलाई विघटन गरेर संगठन सुदृढिकरण, विस्तार र वडा भेला सम्पन्न गरिसकेका छौं ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक अवस्था कस्तो छ ?
मिक्लाजुङमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सांगठनिक अवस्था एकदम दर्बिलो छ । विगतदेखि नै हो माओवादी केन्द्रको प्रभाव क्षेत्र हो । गत संविधानसभा निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा हामीले नै लिड गरेका थियौं । त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा पनि हामी साख जोगाउने छौं ।
चुनावी तयारी कस्तो छ ? कुन पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?
हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०७४ साल बैशाख ३१ गते स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । योसँगै चुनावको सुनिश्चतासँगै हामी पूर्णरूपमा तयारीमा लागेका छौं । हामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न र सुखद नतिजा निकाल्न सक्षम छौं । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा हाम्रो प्रतिस्पर्धा एमालेसँग नै हुन्छ । ९ वडामा हामी ४ वटामा बलियो छौं । अन्य वडामा मेहनत गरिरहेका छौं ।
माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्ता उम्मेद्वारलाई टिकट दिनु पर्दछ ?
पार्टीले काममा इमान्दारिताका साथ लागेका, स्थानीय तहको विकास निर्माणमा सक्रिय भएर लागेका र सामाजिक व्यक्तित्व बनाएका व्यक्तिलाई टिकट दिँदा राम्रो हुन्छ । त्यसो गर्दा बलियो सांगठनिक अवस्थामा अझ जीतका लागि सुनिश्चता हुन्छ ।
तपाई पनि उम्मेद्वार बन्ने चर्चा छ ? तपाईलाईं पार्टीले टिकट दिनुपर्ने आधार के छ ?
म उम्मेद्वार बन्ने कुरा चर्चामा आउनु स्वाभाविकै हो । मैले मिक्लाजुङ क्षेत्रको सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान र इमान्दारिताका कारण चर्चा बटुल्न सफल भएको जस्तो लाग्छ । यस गाउँपालिकामा राजनीतिक र व्यक्तिगत एजेण्डा बनाउन योगदान गरेको छु । जहाँसम्म मलाई पार्टीले टिकट दिनुपर्ने आधारमा अहिलेको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सामाजिक महत्व र सामाजिक माहोलको विषयलाई लिएर चर्चा र परिचर्चा हुँदै आएको छ । सामाजिक तथा पार्टीको एजेण्डा लिएर अगाडि बढ्न सक्ने युवा नेतृत्व भएको हैसियतले मेरो दाबेदारी हो । दोस्रो पार्टीको अनुभव पनि १६ वर्षदेखिको हो ।
अर्काे जागिरबाट रिटायर्ड भएर वा बूढो भएर राजनीति गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नका लागि राजनीतिलाई समाजसेवामा रूपान्तरण गर्न युवाको नेतृत्व आवश्यक छ । राजनीतिक तथा सामाजिक अनुभवसँगै युवा भएकाले टिकट पाउनेमा ढुक्क छु ।
टिकटमा देखिने आकांक्षीको लर्काेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?
पार्टीबाट आकांक्षा राख्नु स्वभाविक हो । २० वर्षयता स्थानीय चुनाव भएको छैन । यो लामो ‘ग्याप’ ले पुराना तथा नयाँ नेता आकांक्षी भएकाले जटिलजस्तो देखिएको हो । पार्टीमा योगदान गर्ने धेरै नेता तथा कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । धेरै साथीहरूको दाबेदारीले केही समस्या त होलान्, त्यो पार्टीका नेताहरू बसेर मिलाउने कुरा हो । कार्यकर्ता र जनताबीच तल्लो तहमा नै जानु पर्ने रहेछ । अनि मात्र पार्टी संगठनले पत्याउने रहेछ भन्ने बनाउन सके भने मिक्लाजुङमा माओवादी केन्द्रको ठूलो उपलब्धी हुनेछ ।
टिकटका लागि नेताहरूको भागबण्डा गर्ने चलन छ । मिक्लाजुङ त्यसको असर कस्तो छ ?
भागवण्डाले समस्या नै छ । यहाँ समुदायको बाहुल्यताका आधारमा टिकट दिनुपर्ने दाबेदारी पनि छ । यो विलकुल गलत प्रवृत्ति हो । राजनीतिक तथा सामाजिक काम गर्न इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसैले पार्टीमा सक्रिय भएर लागेका, इमान्दार, संगठनमा भिजेको, योग्य र सक्षम क्षमतावान व्यक्तिले स्थान पाउनु पर्छ र पाउँछन् पनि ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका भनेको सबैभन्दा अव्यवस्थित बसोबास भएको क्षेत्र हो । यहाँ खानेपानी, यातायात, सडक, बिद्युत, बाढी, पहिरोलगायतको समस्या विद्यमान छ । सर्वप्रथम यसलाई व्यवस्थित बनाउन अहिलेको ठूलो चुनौती छ । प्राकृतिक रूपले धनी भएकाले यहाँको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं । यसका लागि एउटा सक्षम नेतृत्वको आवश्यक रहेको मैले ठानेको छु ।
तपाई पार्टीबाट मिक्लाजुङको अध्यक्ष भएकै समयमा तीन वटा निर्वाचन हुंदैछ कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? तीन वटै निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ ?
चुनावलाई मैले खुशीका साथ लिएको छु । सबै साथीहरूलाई मिलाएर अघि बढेको छु । मिक्लाजुङमा माओवादी केन्द्रको अवस्था राम्रो छ, अझ त्यसलाई बलियो बनाउन लागि रहेका छौं । मिक्लाजुङमा माओवादी केन्द्रको जीत सुनिश्चता नै देख्छु । यहाँ राम्रा मान्छेको पहिचान गराउन सके माओवादी केन्द्रको जीत सुनिश्चित हुन्छ ।
र, अन्त्यमा कार्यकर्ता र मतदातालाई के आग्रह गर्नु हुन्छ ?
सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई व्यक्तिभन्दा संस्था र हामी भन्ने सोच राख्नु पर्दछ । पार्टीभित्र काम गर्न सक्ने योग्य र इमान्दार उम्मेद्वार छान्न सुझाव दिन्छु । हामी केही दिनमा नै आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने योजनामा छौं । पार्टीभित्र रहनुभएका सम्पूर्ण जिम्मेवारी साथीहरूलाई सबैको साथ, सहयोग र सल्लाहअनुसार काम गर्न आग्रह गर्दछु ।